မြစ်ဆုံ: မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို ဆေးထိုးသတ်ခဲ.ကြောင်း ဒေါက်တာမာရေးဝန်ခံပြီ
ကမ္ဘာကျော် ပေါ.ဂီတ ဘုရင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် အသက်(၅၀နှစ်)ဟာ
အမေရိကန် နိုင်ငံ လော့အိန်ဂျလိစ်မြို့ ရှိ သူ၏နေအိမ်တွင် (၂၀၀၉ဇွန်လ၂၅ရက်) ကြာသပတေးနေ့-နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဦးနှောက်ထည်းသို. အောက်ဆီဂျင် မရောက်သော ရောဂါဖြင်. သေဆုံးသွားခဲ.သည်။ မိုက်ကယ်သေဆုံး မှုမှာသွေးရိုးသား ရိုး ဟုတ် မဟုတ်ဆိုသည်မှာ မည်သူမျှ တပ်အပ်မပြောနိုင်ခဲ.ပေ။ သန်းနဲ.ချီသော သူ.ပရိသတ်များမှာလည်း သည် ပြဿနာကို စိတ်ဝင်စားခဲ.သည်။ ဘာကြောင်.လည်း ဘယ်သူ လုပ်တာလည်း ---- လဲ-- မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို တိကျစွာဖြေနိုင်ဖို. လည်း မည်သူမျှမတတ်နိုင်ခဲ.ပေ။
မိုက်ကယ်ကို အလွန်အားပြင်းတဲ.မေ.ဆေးများထိုးသွင်းရာတွင် ကူညီခဲ.ကြောင်း ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာမာရေးဟာ အနည်းဆုံး ထောင် ၄ နှစ်ကျခံဖွယ်ရှိပါသည်။
လူတစ်ယောက်ကို သတ်ရင် .. ထောင် ၄ နှစ်ပဲကျသလား .. လောကကြီးက တချို့ လူများအတွက် မတရားလိုက်တာ ..
17 November 2011 at 06:17
အင်း သူ့ကိုလည်း အဲ့ဒီဆေးနဲ့ပြန်ထိုးသတ်သင့်ပါတယ်။ ခုမှဝန်ခံရတယ်လို့....
လောကကြီးကလည်း ထူးဆန်းလိုက်တာနော် ဘာတွေလည်း မသိဘူး
ဖြစ်ရလေ ဂျက်ဆင်ရယ်.. ဘာလို့များ အိပ်မပျော်နိုင်ရတာလဲ အကြွေးတွေများပေးစရာရှိလို့ထင်ပါ့ :D
ခုတော့ အိပ်ပျော်အောင် ဆေးထိုးလိုက်တာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားပြီ :D